प्रेम के हो ? यो हेर्नुस्, यति महान महिलालाई सबैले सम्मान र सहयोग गरेों (पुरा भिडियो हेर्नुहोस्)। – Khabar Patrika Np
प्रेम के हो ? यो हेर्नुस्, यति महान महिलालाई सबैले सम्मान र सहयोग गरेों (पुरा भिडियो हेर्नुहोस्)।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र २३, २०७७ समय: ०:०८:४७
सर्लाहीकी सरस्वती कोइराला कक्षा १० मा पढेदा १८ वर्षकी थिइन् । उनको परिचय अशोक उप्रेती नामका ट्रक ड्राइभरसंग चिनजान भयो । अशोक अभिभावक विहिन थिए । भेटघाट भएपछि अशोकले सरस्वतीको मोवाइल नम्बर फेला पारे । त्यसपछि उनले सरस्वतीलाई दिनहुँ फोन गर्न थाले । त्यस पछि दुवैको प्रेम बस्यो । तर सरस्वतीसंग विवाह गर्दा अशोक अस्वस्थ्य थिए । त्यो कुरा सरस्वतीलाई थाहा थिएन । उनले आफ्नो हजुरवुवावाट ११ वर्ष अघि म्रिगौला प्रत्यारोपण गराएका थिए । विवाह भएको ३ वर्ष अघि उनले म्रिगौला प्रत्यारोपण गराएका थिए ।
विवाह पछि उनीहरुले एक छोरा र एक छोरी जन्माए । ११ वर्ष अघि हजुरवुवाले दिएको म्रिगौलाले काम गर्न छोडेको छ । अशोक म्रिगौलाको विरामी हुन भन्ने थाहा पाएर पनि प्रेम विवाह गरेकी सरस्वतीको अगाडी फेरी अर्को परिक्षा आयो । एक पटक म्रिगौलाको रोगी हुन् भन्ने थाहा पाएपछि विवाह गर्ने कि नगर्ने दोधारमा परेकी सरस्वतीले ठूलो मन गरेर निर्णय गरेकी थिइन् । जिवनभर अशोकलाई साथ दिने । अहिले फेरी उनका सामु अर्को परिक्षा आएको छ । उनले आफ्ना श्रीमानलाई फेरी अर्को म्रिगौला दिने निर्णय गरेकी छन् ।
तर म्रिगौला प्रत्यारोपण गर्दा दुवै जना अस्वस्थ्य हुन्छन् । त्यसवेला यि छोराछोरी कसले संरक्षण गरिदिने उनीहरुका लागि विकल्प छैन । मैले अहिले पनि हिम्मत हारेकी छैन, सरस्वती भन्छिन्, त्यती बेला पनि मलाई केही लागेको थिएन । अहिले पनि ब चा उन सक्छु भन्ने लागेको छ । सबै भन्दा ठूलो मायाँ हो उ भए पो म छु । उ नभए संसार नै छैन । त्यही भएर मैले म्रिगौला दिने निर्णय गरेँ । उनी भन्छिन् म भगवानलाई दो ष दिन्न । कसलाई दो ष दिएर के हुन्छ र उनको आशावादी यो कुराले सबैलाई प्रेरणा दिन्छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******